1. Manaja ny fiainanao manokana izahay
1.1. Released Pty Ltd dia manaja ny zonao amin'ny fiainana manokana ary manolo-tena amin'ny fiarovana ny tsiambaratelon'ny mpanjifantsika sy ny mpitsidika tranokala. Manaraka ny fitsipiky ny fiainana manokana aostraliana voarakitra ao amin'ny Lalàna momba ny fiainana manokana 1988 (Cth) izahay. Ity politika ity dia mamaritra ny fomba fanangonana sy fitondranay ny mombamomba anao manokana.
1.2. Ny "fampahafantarana manokana" dia fampahalalana izay azonay fantatra fa momba anao.
2. Fanangonana mombamomba manokana
2.1. Released Pty Ltd dia, indraindray, mandray sy mitahiry ny mombamomba anao manokana ampidirinao ao amin'ny tranokalanay, omena anay mivantana na omena anay amin'ny endrika hafa.
2.2. Azonao atao ny manome fampahalalana fototra toy ny anaranao, ny nomeraon-telefaoninao, ny adiresinao ary ny adiresy mailaka mba ahafahantsika mandefa vaovao, manome fanavaozam-baovao ary mikarakara ny vokatrao na serivisy. Mety hanangona fampahalalana fanampiny amin'ny fotoana hafa izahay, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny, rehefa manome valiny ianao, rehefa manome fampahalalana momba ny raharahanao manokana na raharaham-barotra, manova ny atiny na ny safidinao mailaka, mamaly fanadihadiana sy/na fampiroboroboana, manome vola na trosa. fampahalalana momba ny karatra, na mifandray amin'ny fanohanan'ny mpanjifanay.
2.3. Azonao atao ny manome fampahalalana fototra toy ny anaranao, ny nomeraon-telefaoninao, ny adiresinao ary ny adiresy mailaka mba ahafahantsika mandefa vaovao, manome fanavaozam-baovao ary mikarakara ny vokatrao na serivisy. Mety hanangona fampahalalana fanampiny amin'ny fotoana hafa izahay, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny, rehefa manome valiny ianao, rehefa manome fampahalalana momba ny raharahanao manokana na raharaham-barotra, manova ny atiny na ny safidinao mailaka, mamaly fanadihadiana sy/na fampiroboroboana, manome vola na trosa. fampahalalana momba ny karatra, na mifandray amin'ny fanohanan'ny mpanjifanay.
Released Pty Ltd dia, indraindray, handray sy hitahiry ny mombamomba anao manokana ampidirinao ao amin'ny tranokalanay, omena anay mivantana na omena anay amin'ny endrika hafa.
Fanampin'izany, mety hanangona vaovao hafa omenao koa izahay rehefa mifandray aminay.
3. Ny fomba fanangonanay ny mombamomba anao manokana
3.1. Released Pty Ltd dia manangona ny mombamomba anao manokana amin'ny fomba isan-karazany, ao anatin'izany ny rehefa mifandray aminay amin'ny fomba elektronika na mivantana ianao, rehefa miditra amin'ny tranokalanay ianao ary rehefa manome ny serivisy ho anao izahay. Mety hahazo fampahalalana manokana avy amin'ny antoko fahatelo isika. Raha manao izany izahay dia hiaro azy araka ny voalaza ao amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity.
4. Fampiasana ny mombamomba anao manokana
4.1. Released Pty Ltd dia mety mampiasa ny mombamomba anao manokana nangonina avy aminao mba hanomezana anao vaovao, fanavaozana ary serivisy. Azonay atao koa ny mampahafantatra anao ny vokatra, serivisy ary fahafahana vaovao sy fanampiny azonao omena anao. Mety hampiasa ny mombamomba anao manokana izahay hanatsarana ny vokatra sy ny serivisinay ary hahatakatra bebe kokoa ny filanao.
4.2. Released Pty Ltd dia mety hifandray aminao amin'ny alàlan'ny fepetra isan-karazany ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny telefaona, mailaka, sms na mailaka.
5. Fampahafantarana ny mombamomba anao manokana
5.1. Azonay atao ny manambara ny mombamomba anao manokana amin'ny mpiasanay, tompon'andraikitra, mpiantoka, mpanolotsaina matihanina, masoivoho, mpamatsy na mpiantoka raha ilaina amin'ny tanjona voafaritry ity politika ity. Ny mombamomba ny tena manokana dia omena olon-kafa raha ilaina amin'ny fanaterana ny serivisy.
5.2 Mety mila mamboraka ny mombamomba ny tenantsika isika indraindray mba hankatoavana ny fepetra takian'ny lalàna, toy ny lalàna, fitsipika, didim-pitsarana, fiantsoana, didy, mandritra ny fizotran'ny fitsarana na ho setrin'ny fangatahan'ny masoivoho mpampihatra lalàna.
5.3 Azontsika ampiasaina ihany koa ny mombamomba anao mba hiarovana ny zon'ny mpamorona, marika, zo ara-dalàna, fananana na fiarovana ny Released Pty Ltd, www.makemeetingsmatter.com, ny mpanjifany na ny antoko fahatelo.
5.4 Ny fampahalalana izay angoninay dia mety ho voatahiry, hokarakaraina, na hafindra eo amin'ireo antoko any amin'ny firenena ivelan'i Aostralia.
5.5 Raha misy fiovana eo amin'ny fanaraha-maso ao amin'ny orinasanay na fivarotana na famindrana ny fananan'ny orinasa, dia manan-jo hamindra araka izay azo atao araka ny lalàna ny angon-drakitra mpampiasa anay, miaraka amin'ny mombamomba ny tena manokana sy ny mombamomba ny tena manokana voarakitra ao anatin'ireo tahiry ireo. Ity fampahalalana ity dia azo amboarina amin'ny mpividy iray amin'ny fifanarahana amin'ny fitazonana ny tsiambaratelo. Tsy mitady afa-tsy ny hamoaka vaovao amim-pahatokiana sy amin'izay itakiana amin'ireo toe-javatra voalaza etsy ambony ireo izahay.
5.6 Amin'ny fanomezana anay ny mombamomba anao manokana dia manaiky ny fepetran'ity Politika momba ny fiainana manokana ity ianao sy ireo karazana fampahafantarana voarakotry ity Politika ity. Raha ambaranay amin'ny ankolafy fahatelo ny mombamomba anao manokana, dia angatahanay ny hanarahan'ny antoko fahatelo ity Politika momba ny fitantanana ny mombamomba anao manokana ity
6. Fiarovana ny mombamomba anao manokana
6.1. Released Pty Ltd dia manolo-tena hiantoka fa azo antoka ny fampahalalana omenao anay. Mba hisorohana ny fidirana tsy nahazoana alalana na ny fampahafantarana, dia nametraka fomba fiasa ara-batana, elektronika ary fitantanana sahaza mba hiarovana sy hiarovana ny vaovao ary hiarovana azy amin'ny fampiasana diso, fanelingelenana, fahaverezana ary fidirana tsy nahazoana alalana, fanovana ary fampahafantarana.
6.2. Ny fampitana sy ny fifanakalozam-baovao dia atao amin'ny risikao manokana. Tsy afaka miantoka ny fiarovana ny vaovao rehetra ampitainao aminay izahay, na azonao avy aminay. Na dia mandray fepetra hiarovana amin'ny fampahafantarana tsy nahazoana alalana aza izahay, dia tsy afaka manome toky anao izahay fa tsy hambara amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ity Politika momba ny fiainana manokana ity ny mombamomba ny tena manokana izay angoninay.
7. Fidirana amin'ny mombamomba anao manokana
7.1. Azonao atao ny mangataka antsipirihan'ny mombamomba anao izay tazoninay momba anao araka ny fepetra voalazan'ny Lalàna momba ny fiainana manokana 1988 (Cth). Ny saram-pitantanana kely dia azo aloa amin'ny fanomezana vaovao. Raha tianao ny dika mitovy amin'ny fampahalalana, izay tazoninay momba anao na inoanao fa tsy marina, lany daty, tsy feno, tsy misy dikany na mamitaka, azafady alefaso mailaka izahay contact@makemeetingsmatter.com.
7.2. Izahay dia manan-jo handà tsy hanome anao ny vaovao voatanay momba anao, amin'ny toe-javatra sasany voafaritry ny Lalàna momba ny fiainana manokana.
8. Fitarainana momba ny fiainana manokana
8.1. Raha manana fitarainana momba ny fomba fanaonay manokana ianao dia aza misalasala mandefa ny antsipirian'ny fitarainanao amin'ny contact@makemeetingsmatter.com. Raisinay amim-pahamatorana ny fitarainana ary hamaly izany fotoana fohy aorian'ny naharay filazana an-tsoratra momba ny fitarainanao.
9. Fanovana amin'ny politikan'ny fiainana manokana
9.1. Azafady, fantaro fa mety hanova ity Politika momba ny fiainana manokana ity izahay amin'ny ho avy. Afaka manova ity Politika ity isika amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fanapahan-kevitray manokana ary ny fanovana rehetra dia hahomby avy hatrany rehefa alefanay ny fanovana ao amin'ny tranokalanay na ny birao fampandrenesana. Miverena tsindraindray azafady mba hijery ny Politika momba ny fiainana manokana.
10.1. Rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao (www.makemeetingsmatter.com) dia mety hanangona fampahalalana sasantsasany toy ny karazana navigateur, rafitra fiasana, tranokala notsidihina avy hatrany alohan'ny hidirana ao amin'ny tranokalanay, sns. tranonkala, mba hahafahantsika manatsara ny serivisy ho an'ny sehatra fitantanana ny fivoriana.
10.2. Cookies - Mety hampiasa cookies amin'ny tranokalanay izahay indraindray. Cookies dia rakitra tena kely izay ampiasain'ny tranonkala iray hamantarana anao rehefa miverina amin'ny tranokala ianao ary hitahiry ny antsipiriany momba ny fampiasanao ny tranokala. Ny cookies dia tsy programa manimba izay miditra na manimba ny solosainao. Ny ankamaroan'ny mpitety tranonkala dia manaiky ho azy ny mofomamy saingy azonao atao ny misafidy ny handà ny mofomamy amin'ny fanovana ny firafitry ny navigateur. Na izany aza, mety hisakana anao tsy hanararaotra tanteraka ny tranokalanay izany. Ny tranokalanay dia mety hampiasa cookies tsindraindray handinihana ny fifamoivoizana amin'ny tranokala ary hanampy anay hanome traikefa mpitsidika tranokala tsara kokoa. Ankoatra izany, ny cookies dia azo ampiasaina handefasana doka mifandraika amin'ny mpitsidika tranokala amin'ny alàlan'ny serivisy antoko fahatelo toy ny Google Adwords. Ireo doka ireo dia mety hiseho amin'ity tranokala ity na tranokala hafa tsidihinao.
10.3. Tranonkala antoko fahatelo - Ny tranokalanay dia mety manana rohy mankany amin'ny tranokala hafa tsy tompon'ny na fehezinay indraindray. Ireo rohy ireo dia natao ho anao fotsiny. Ny rohy mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo dia tsy mahaforona fanohanana na fanohanana na fankatoavana ireo tranonkala ireo. Azafady, fantaro fa ny Released Pty Ltd dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fomba fiainana manokana amin'ny tranokala hafa toy izany. Mamporisika ireo mpampiasa anay izahay mba ho tonga saina, rehefa miala amin'ny tranokalanay, hamaky ny fanambarana momba ny fiainana manokana ataon'ny tranonkala tsirairay izay manangona fampahalalana manokana.